Paikady - Runchen Industry Co., Ltd.
NY ASA ANAY
Runjin Industry Co., Ltd. dia mpamatsy vahaolana Ice-cream matihanina notohanan'ny ekipa injeniera mahay efa za-draharaha manana traikefa an-taonany maro amin'ny sehatry ny gilasy, na mpanamboatra fitaovana gilasy na orinasa mpamokatra gilasy.
Runjin dia manome serivisy ho an'ny orinasa mpanao gilasy any amin'ny faritra ambany kokoa:
Manaova sy mivarotra fitaovana fanamboarana gilasy mahazatra sy namboarina
Ny fizotran'ny fananganana gilasy sy ny endrika famolavolana, ny famolavolana ny fahaiza-manao ary ny fametrahana injeniera
Fitantanana, fampiofanana ary consultant an'ny orinasa
Manam-pahaizana sy za-draharaha amin'ny fanatsarana ny fizotry ny famokarana ary mampihena ny vidin'ny fiovam-po
Izay antenainao indrindra, ny endrika tsara indrindra, ny faritra misy kalitao ary koa ny fitoniana azo antoka, miantoka ny filan'ny famokarana ilaina amin'ny fomba feno ary mampihena ny fandaniam-potoana.
Fantatray fa ny fizotran'ny famokarana sy ny endrika famolavolana ary ny endrika fahaiza-manao serivisy ara-toekarena dia miantoka ny fiasa mahomby sy ny vidin'ny fiovam-po mifaninana. Tsy hoe rehefa mikasa amin'ny taratasy fa afaka mampihatra ara-dalàna.
Serivisy mahomby amin'ny filanao. Izahay dia miantoka ny fitaovanao mandeha amin'ny toe-javatra mety, ho fanampin'izay, afaka manohana amin'ny fikolokoloana, serivisy fanavaozana ny fitaovana sy kojakoja fanampiny izahay, ary bebe kokoa amin'ny consultation fitantanana orinasa, fanavaozana ny orinasa manontolo, ny fizotran'ny fizotrany ary ny endrika fahaiza-manao amin'ny serivisy sns.
Miorina amin'ny serivisy miompana amin'ny mpanjifa sy ny tombony ara-teknika, Runjin dia manolo-tena amin'ny fitaovana tsara kalitao sy serivisy tsara ary fanohanana ara-teknika. Manantena ny safidinao amin'ny Runjin izahay